Yintoni i-Panic Book Panel?
Iphaneli yencwadi yamacwecwe ayilona nje uhlobo lwepaneli oyifumana kwiComic-Con , ekuqaleni libhekisela kumacandelo omsebenzi ngamnye owenza iphepha elilodwa kwincwadi yamahlaya.
"Iphaneli" kwincwadi enemihla yomxholo kwinqutyana enye yephepha lemibala. Ngokuqhelekileyo iphepha leencwadi zemihla ngemihla lenziwe ngamapaneli ahlukeneyo, xa ehlanganiswa, xelela ibali kwindlela yokulandelana.
Enye indlela yokujonga kwiphaneli yinto efana nomboniso kwi-movie okanye kumabonwakude.
Iphaneli yamahlaya iya kuba yinxalenye ebalulekileyo yendawo ukuba idlulise ulwazi olubanzi. Isicatshulwa ngendlela yeibhaluni zegama kunye neengxelo zisetyenziselwa ukuqedela ityala.
Zingaphi Iiphaneli Ziphepha Page?
Ngokuqhelekileyo, inani elifanayo leepaneli zephepha lemihla ngemihla lihlanu ukuya ezintandathu. Nangona kunjalo, abaculi bencwadi yamahlaya banokudlala ngefomathi yephepha ukukhupha iimvakalelo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, elinye iphepha lingaqukatha iphaneli enye ekhethekileyo, egxininisayo okanye ingenziwa ngamanqanaba amancinci amancinci ukukunceda ukubonisa ukuhamba kwexesha okanye ukubonisa ukuphendulela ezininzi kwisiganeko. Ngokomzekelo, kwi- Master Race , uBernie Krigstein usebenzisa iipelisi ezininzi, ezincinci zokunciphisa ixesha lokuba nomthelela omkhulu. Ukudlala ngobukhulu kunye nokubekwa kwamapaneli kunokudala ukugxininisa kunye nokudlala umdlalo-mdlalo oya kuba yinto elula yokudlala nemvakalelo yomfundi.
Kwiimidyarki zaseMerika, iphepha lifundwa ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla, kanti into eyahlukileyo yinyani yama manga .
Ngokuqhelekileyo, kucacile ukuba umntu uya kufunda isicatshulwa aze abuke kumfanekiso, ahambe ngokulandelana, njengoko uya kuhamba ngomgca kwincwadi. Nangona kunjalo, abanye abaculi beencwadi abaculi badlala nefomathi yephepha kunye nokubekwa kwamabhabhu amagama kunye neebhokisi zeetekisi. Ngo-Alan Moore's Promethea, umzekelo, umculi uJH
UWilliams III ugweba isakhiwo sekhasi lesicatshulwa esiphezulu ezintandathu. A
Ukudlala kunye nokusekwa kwiphepha lemihla ngemihla, ubungakanani kunye nokubekwa kweepaneli, ubungakanani kunye nesitayela sombhalo, zimbalwa nje zendlela zeengcali zama-comic abaculi abanokuphakamisa umsebenzi kunye nokuphuhlisa isitayela esisayina.
I-Top 9 Consic-Cons e-US
Izinketho zeMatriki kunye neZatifikethi zokuPhakamisa i-Majors Majors
Tshintsha iFayile yeFayile
Iimoto ezinkulu kakhulu zikaWillie G. Davidson
Amahlaya ezombusazwe emva kobusuku
Iinkolelo zeCowboy kunye neZenzo
Isikhokelo esifutshane samaPhuculuthu
IYangshao Impucuko kwiNkcubeko yeChina
Ukufunda Ukuchaza Amashadi Okuzalwa